Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Nin mindi ku hubeysan oo dalka Switzerland ku weeraray rakaab la socday tareen (Daawo Sawirro)
August 19 2017 00:59:38
Nin mindi ku hubeysan oo dalka Switzerland ku weeraray rakaab la socday tareen (Daawo Sawirro)
Nin ku hubeysnaa Midi ayaa weerar todoba ruux lagu dhaawacay ku qaaday tareen ay la socdeen dad rakaab ah oo marayey koonfurta wadanka Switzerland, isagoo ka dibna dab qabadsiiyey tareenka sida Booliska wadankaas ay sheegeen.
Dadka u ninkan mindida ku dhaawacay ayaa waxaa ku jira ilmo lix sano jir ah, haween iyo nin da’ah, iyadoo weerarkan uu ka dhacay meel ku dhow xarun laga raaco tareenada ee Salez-Sennwald una dhexeysa Buchs iyo Sennwald.
Booliska ayaa sheegay in qofka weerarka geystey uu ahaa nin 27 jir ah oo dalkaas u dhashay, kaasoo gacanta lagu dhigay isagoo dhaawacyo qaba.
Illaa hadda Boolisku faahfaahin kama bixin sababta ka dambeysay weerarkan iyadoo saraakiishu sheegeen iney baaritaano wadaan, waxaana shir jaraa’id saxaafada isugu yeeray Wasiirka arrimaha gudaha wadankaas.
Weerarkan ayaa qeyb ka ah weeraro la mid ah oo mudooyinkan ku soo badanayey qaarada Yurub, kuwaasoo intooda badan lagu eedeeyo iney ka dambeeyeen kooxo xagjir xiriir la leh kooxda Daacish.